Batsirai Vana Kuti Vasakanganiswa Nenhau Dzinotyisa | Mazano Ekubatsira Mhuri
SARUDZA MUTAURO Afrikaans Albanian Amharic Arabic Arabic (Lebanon) Armenian Azerbaijani Bicol Bislama Bulgarian Catalan Cebuano Chichewa Chin (Hakha) Chinese Cantonese (Simplified) Chinese Cantonese (Traditional) Chinese Mandarin (Simplified) Chinese Mandarin (Traditional) Chirungu Chitonga Chitumbuka Chiyao Croatian Czech Danish Dutch Estonian Faroese Fijian Finnish French Georgian German Greek Haitian Creole Hausa Hebrew Hiligaynon Hungarian Iban Iloko Indonesian Isoko Italian Japanese Javanese Kamba Kannada Kazakh Kinyarwanda Kirghiz Kirundi Korean Kyangonde Lari Lithuanian Malagasy Malay Malayalam Maya Mutauro Wemasaini wechiSpanish Mutauro Wemasaini wokuAmerica Mutauro Wemasaini wokuBrazil Mutauro Wemasaini wokuColombia Mutauro Wemasaini wokuItaly Mutauro Wemasaini wokuPeru Mutauro Wemasaini wokuRussia Myanmar Nepali Norwegian Oromo Otomi (Mezquital Valley) Pangasinan Persian Pidgin (West Africa) Polish Portuguese (Brazil) Portuguese (Portugal) Punjabi Quichua (Chimborazo) Quichua (Imbabura) Romanian Russian Sango Serbian (Cyrillic) Serbian (Roman) Seychelles Creole Shona Sinhala Slovak Slovenian Spanish Swahili Swedish Tagalog Tamil Tarascan Tatar Thai Tsonga Turkish Twi Tzotzil Ukrainian Valencian Vietnamese Yoruba
Batsirai Vana Venyu Kuti Vasakanganiswa Nezvinhu Zvinotyisa Zvinobuda Munhau
Audio Nzira dzokudhaunirodha zvakarekodhwa Batsirai Vana Venyu Kuti Vasakanganiswa Nezvinhu Zvinotyisa Zvinobuda Munhau
Nhau dzezvinhu zvinotyisa dzinobuda paTV, pamafoni, matablet nepamakombiyuta. Dzimwe nguva, panenge patori nemavhidhiyo anonyatsoratidza maitikiro anenge aita zvinhu zvacho.
Uye vana vanenge vachiona zvinhu izvozvo.
Mungabatsira sei vana venyu kuti vasanyanya kunetseka pavanoona zvinhu zvinotyisa zvinobuda munhau?
Vana vanokanganiswa sei nezvinhu zvinotyisa zvinobuda munhau?
Mungabatsira sei vana venyu kuti vasakanganiswa nezvinhu zvinobuda munhau?
Ko kana mwana wenyu akaona zvinhu zvinotyisa zvichiitika?
Vana vakawanda vanonetseka pavanoona zvinhu zvinotyisa munhau. Vamwe vana vanogona kuomerwa nekutaura manzwiro avanenge vachiita, asi zvinhu zvinotyisa zvinenge zvabuda munhau zvinogona kuita kuti vanetseke chaizvo. * Vanogona kutowedzera kunetseka kana vakaona kuti vabereki vavo vari kunetsekawo nezvenyaya yacho.
Vana vanogona kusanyatsonzwisisa zvinhu zvavanoona munhau. Semuenzaniso, vamwe vanogona kufunga kuti zvinhu zvavaona munhau zvichatoitika kumhuri yavo. Uye vechidiki vanoramba vachidzokorora kuona vhidhiyo inoratidza zvinhu zvinotyisa zvakaitika vanogona kufunga kuti zvinhu zvacho zviri kuramba zvichingoitika.
Vana vanogona kutadza kunzwisisa kana zviri kubuda munhau zviri izvo zvakanyatsoitika. Vanogona kusaziva kuti kubudisa nhau ritori bhizinesi rinowanisa vamwe vanhu mari yakawanda zvichibva pakuti nhau dzacho dzaonekwa nevanhu vakawanda zvakadii. Saka vezvenhau vanogona kuwedzeredza tumwe tunhu panyaya yacho vachiitira kuti vakawanda vade kuziva zvakawanda, voramba vachiiona.
Itai kuti vasanyanye kuona kana kuteerera nhau dzinotyisa. Izvi hazvirevi kuti vana venyu havafaniri kuziva zviri kuitika munyika. Asi hazvina kunaka kuti varambe vachidzokorora kuona kana kuteerera nhau dzezvinhu zvinotyisa.
“Dzimwe nguva ini nemurume wangu tinotaura zvinhu zvinenge zvabuda munhau, tisingambofungi nezvekukanganisa kwazvinoita vana vedu vanenge vachitinzwa.”—Maria.
Zvinotaurwa neBhaibheri: “Kunetseka kuri mumwoyo wemunhu kunouremedza.”—Zvirevo 12:25.
Nyatsoteererai, uye pindurai muchiratidza kuti munovanzwira tsitsi. Kana zvakaomera mwana wenyu kuti ataure nezvenyaya yacho, munogona kuita kuti aite zvekudhirowa mapikicha. Pamunotaura nemwana wenyu, shandisai mashoko aanonzwisisa asi musataure zvimwe zvinhu nezvenyaya yacho zvaasingafaniri kuziva.
“Tinoona sekuti mwanasikana wedu anoti gadzikanei kana tikagara pasi toteerera zvaanenge achitaura. Kungomuudza kuti, ‘Ndiwo mamiriro atoita zvinhu, saka tava kufanira kujaira zviripo,’ hakuna zvakunomubatsira.”—Sarahi.
Zvinotaurwa neBhaibheri: ‘Kurumidza kuteerera, nonoka kutaura.’—Jakobho 1:19.
Batsirai vana venyu kuti vanzwisise zvavanoona munhau. Semuenzaniso, nyaya inotaura nezvekubiwa kwemunhu inogona kubudiswa nenzira inoita kuti munhu afunge kuti zvinhu izvozvo zvichatoitika. Tsanangurirai vana venyu zvamakatoita kuti vagare vakachengeteka. Uye yeukai kuti nyaya dzinotyisa dzinobudiswa munhau hadziwanzogari dzichiitika.
“Batsira vana vako kuti vasanyanya kunetseka. Kakawanda, zvinhu zvatinoisa mupfungwa dzedu ndizvo zvatinogara tichifunga, saka kana tikabatsira vana vedu kuti vafunge zvinhu zvakanaka, havazonyanyi kunetseka.”—Lourdes.
Zvinotaurwa neBhaibheri: “Munhu ane mwoyo wakachenjera anopa muromo wake njere uye anowedzera kunyengetedza pamiromo yake.”—Zvirevo 16:23.
^ ndima 4 Kana vaine zviri kuvadya mwoyo, vana vadiki vanogona kutanga kunyorovesa machira vakarara kana kuramba kuenda kuchikoro kana kuramba kubva panenge paine vabereki vavo.
Musi wa7 May 2019, vamwe vana vaviri vakatanga kupfura vamwe nepfuti pane chimwe chikoro kuHighlands Ranch, iri muColorado, kuU.S.A., vachibva vauraya mumwe mukomana uye vakakuvadza vamwe vanhu 8. Jack, ane makore 9, anodzidzawo pachikoro ipapo uye aiva kuchikoro pazvakaitika. Vabereki vake, Ben naCasey, vanotsanangura kuti vakabatsira sei mwana wavo pashure pekunge zvinhu izvi zvaitika.
Mwana wenyu akakanganiswa sei nezvakaitika kuchikoro?
Casey: Kwemwedzi yakawanda, Jack aigara achingonetseka.
Ben: Dzimwe nguva aigona kunge achitofara hake asina zviri kumunetsa asi aiti akangowana chimwe chinhu chinomuyeuchidza zvakaitika aibva atanga kutya zvisingaiti. Jack akanga ava kungogara achifunga kuti pane chimwe chinhu chakaipa chichaitika. Izvi zvainzwisisika nemhaka yezvaakanga aona zvichiitika.
Maiona here nhau dzaitaura zvakanga zvaitika?
Casey: Pakutanga taidziona. Tese tiri vatatu, taigara tichidziona kwevhiki rese. Ini nemurume wangu takazoona kuti kuramba tichiona nhau kwaiita kuti Jack arambe achifunga zvakaitika, uye izvi zvaiita kuti tese tiri vatatu tirambe tichirwadziwa pane kuti tiise pfungwa dzedu pane zvinhu zvaizoita kuti tisanyanya kunetseka.
Zvii zvamakaita kuti mubatsire Jack?
Casey: Kuekisezaisa kwaiita kuti Jack asanyanye kunetseka, saka taiedza kuti zuva rega rega tiwane nguva yekuita izvozvo. Asi chinhu chainyanya kukosha kunyatsomuteerera paaida kutaura. Ndakaona kuti tisati tarara, pakunenge kwati zii, ndipo paainyatsotaura zvaiva pamwoyo pake. Dzimwe nguva taitotaura kweawa rese uye zvaimubatsira kuti aone kuti tinoda kumubatsira.
Mazano api amungapa vabereki vane vana vakaonawo zvinhu zvinotyisa zvichiitika?
Ben: Zvinokosha kuti vana vagare vachinzwa kuti vakachengeteka mumhuri yavo zvinhu zvinotyisa zvisati zvaitika. Kana vakazosangana nezvinhu izvozvo, zvinenge zvava nyore kuti muvabatsire.
Casey: Mwana mumwe nemumwe akasiyana. Mumwe anogona kunge achikurumidza kukanganiswa nezvinenge zvaitika asi mumwe asingadaro. Vamwe vanhu vanogona kufunga kuti uri kunyanyisa kuchengetedza mwana wako, asi ita zvinoenderana nezvinoda mwana wako. Ita kuti munyatsowirirana mumhuri kuitira kuti mwana anzwe akachengeteka ari pamba.
Kudzokorora: Mungabatsira sei vana venyu kuti vasakanganiswa nezvinhu zvinotyisa zvinobuda munhau?
Itai kuti vasanyanye kuona kana kuteerera nhau.
Nyatsoteererai, uye pindurai muchiratidza kuti munovanzwira tsitsi.
Batsirai vana venyu kuti vanzwisise zvavanoona munhau.
Tumirawo vamwe Tumirawo vamwe Batsirai Vana Venyu Kuti Vasakanganiswa Nezvinhu Zvinotyisa Zvinobuda Munhau
ijwhf nyaya 17